जति कम निद्रा त्यति धेरै स्वास्थ्य समस्या बढ्ने, दिनमा कति सुत्नु पर्छ ? – hamrosandesh.com
जति कम निद्रा त्यति धेरै स्वास्थ्य समस्या बढ्ने, दिनमा कति सुत्नु पर्छ ?
निद्रा सबैलाई प्यारो लाग्छ । अक्सर निद्रा आधा घन्टा वा एक घन्टा पनि तल–माथि भयो भने शरीर आलस्य र थकित हुने गर्छ । यसकारण चिकित्सक तथा मनोवैज्ञानिकहरूले सुत्ने र उठ्ने समय निश्चित हुनुपर्ने सल्लाह दिने गर्छन् । उनीहरूले भन्ने गर्छन्– एक वा दुईपटक कामविशेषले रातको निद्रा तल–माथि भए खासै फरक पर्दैन । तर, यो सधैँ तल–माथि वा अनिद्राजस्तो भए यसले शरीरमा गम्भीर नोक्सानी पु¥याउँछ ।
जर्नल स्लिप हेल्थ पब्लिकेसनले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लिएका व्यक्तिको निद्रा राम्रो हुनुपर्ने जनाएको छ । कोरोनाको खोप लिएका व्यक्तिको निद्रा राम्रो छैन भने उसको शरीरको एन्टिबडी उत्पादन शक्ति ५० प्रतिशत ह्रास आउने जर्नल स्लिपमा उल्लेख छ । यसैगरी, सेन्ट फर ह्युमन स्लिप साइन्सले दैनिक ६ घन्टा मात्र सुत्ने व्यक्तिलाई अल्जाइमर रोग लाग्न सक्ने बताएको छ । यसैगरी, नेसनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिनको हालै प्रकाशित भएको रिसर्चअनुसार कम सुत्ने व्यक्तिको इम्युनिटी शक्ति तीन गुणा कम हुने जनाइएको छ ।